Fizahan-tany any Afrika - Asan'ny tsirairay
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany any Afrika - Asan'ny tsirairay
Ny fizahan-tany any Afrika dia raharahan'ny tsirairay hoy ny Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano avy any Kongo nandritra ny fiaraha-misakafo hariva tany Kinshasa izay natolotry ny minisitry ny fizahantany teo aloha, Elvis Mutiri wa Bashara ao amin'ny bokin'ny fizahantany momba ny fahafaha-mampiasa vola any Kongo (DRC) sy raha manao izany any Afrika.
Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano dia mpitsabo iray izay mino ny fizahan-tany amin'ny ankapobeny ary maniry ny hahita an'i Kongo (DRC) hamolavola ny teboka mivarotra lehibe indrindra aminy, ary koa ny fizahan-tany ara-pitsaboana.
Izy no tao ambadiky ny fandrafetana ny tetikasa Round 10 Malaria Global Fund ho an'ny fampiharana ireo toeram-pitsaboana ao amin'ny faritra ara-pahasalamana ao Kabare sy Bagira / South Kivu ary koa hampiofana ireo mpiasan'ny fahasalamana ary hanara-maso ny asan'izy ireo amin'ny faritra ara-pahasalamana. Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano koa dia tao ambadiky ny fiofanana sy ny fanaraha-mason'ny mpampiasa rindrambaiko fanaraha-maso Hagenia (mitatitra ny voka-dratsy ateraky ny antimalaria) amin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao amin'ny faritra ara-pahasalamana any Karisimbi sy Masisi any Kivu Avaratra. Tamin'ny 2002/03 dia izy koa no consultant an'ny fikambanana tsy miankina amin'ny governemanta miady amin'ny VIH / SIDA. Toe-javatra mahasalama kokoa ho an'i Kongo (DRC) ho an'ny ho avy mamiratra kokoa dia ny fahitana an'i Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano.
Ramatoa manan-talenta marobe efa minisitra lefitra tamin'ny 2007 tao amin'ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena ao Congo (DRC).
Ny fahalianan'ny Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany ho an'i Kongo (DRC) sy ny fampisehoana ireo fananana voajanahary rehetra miaraka amin'ny fanantenana hahita fandraisana anjara mivantana amin'ireo vehivavy amin'ny fizahantany ao Kongo (RDC).
Trano fandraisam-bahiny 20 manerantany ho an'ny Kenya
EXPO Dubai 2020 - Miomana ve ny faritra?